China L-Phenylalanine CAS 63-91-2 ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy naoty Pharma Grade (USP) | Honray
Anaran'ny vokatra ：: L-Phenylalanine
L-Phenylalanine (Abhefoated Phe) dia asidra amine tena ilaina ary io ihany no endrika phenylalanine hita amin'ny proteinina. Izy io dia iray amin'ireo asidra amine 18 iraisana, ary iray amin'ireo asidra amine tena ilaina valo ao amin'ny vatan'olombelona.
Amin'ny maha-famenon-tsakafo azy ireo, ny L-phenylalanine dia azo jerena ho vondrona benzyl soloina ny vondrona methyl alanine, na vondrona phenyl ho solon'ny hidrôzenina alanine. Ny ankamaroan'ny vatana amin'ny alàlan'ny phenylalanine hydroxylase dia mampihena ny fitrandrahana ao anaty tyrosine, ary synthetic miaraka amin'ny neurotransmitters sy hormonina manan-danja tyrosine, handray anjara amin'ny metabolisma amin'ny siramamy sy ny metabolisma matavy.
L-phenylalanine dia asidra amika manitra bioactive. Izy io dia asidra amine ilaina izay tsy azon'ny olombelona sy ny biby aorina. Ilaina ny olona mihinana 2.2g L-phenylalanine isan'andro. Amin'ny maha iray amin'ireo asidra amine valo ilaina amin'ny vatan'olombelona, ​​dia be mpampiasa izy io amin'ny indostrian'ny fanafody sy fanafody. Izy io dia singa iray manan-danja amin'ny tsindrona asidra amino. Amin'ny indostrian'ny fanodinana sakafo, ny L-phenylalanine dia azo ampidirina amin'ny sakafo mpanao mofo. Ary ny sakafo mahavelona phenylalanine dia azo hatsaraina ary amin'ny alàlan'ny amido-carboxylation miaraka amin'ny glucide.
Ny L-phenylalanine dia afaka manatsara ny fofon'ny sakafo ary mitazona ny fifandanjana ireo asidra amine ilaina. Amin'ny indostrian'ny pharmaceutika, ny L-phenylalanine dia ampiasaina ho mpanelanelana ny sasany amin'ireo fanafody fanafody anticancer amino toy ny formylmerphalanum sy sns. Fampiharana iray manan-danja iray hafa dia ny manafangaro aspartame amin'ny asidra L-aspartic.
L - phenylalanine no akora fototra mampiditra sakafo manan-danja - mamy Aspartame (Aspartame). Amin'ny maha iray amin'ireo asidra amine tena ilaina ao amin'ny vatana, ny L-phenylalanine dia ampiasaina indrindra amin'ny fampidiran-dra ny asidra amine sy ny fanafody asidra amine ao amin'ny indostrian'ny fanafody.
Kristaly fotsy na vovoka kristaly
5.5 ~ 7,0
Previous: L-Leucine CAS 61-90-5 Ho an'ny kilasy sakafo (AJI USP)
Manaraka: L-valine CAS 72-18-4 ho an'ny kilasy pharm (USP)
Farm kilasy L-Leucine, L-Threonine Pharm, Kilasy Sakafo L-Threonine, Sakafo biby, L-Valine 72-18-4, 73-32-5 L-Isoleucine,